China EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Supermarket-4040 Label na-emepụta na ndị na-ebu ya | Etagtron
① Jiri ihe nchebe RF na ngwongwo ebe mkpado nche na agịga adịghị adabara.
Maka ngwongwo ọ bụla. Ekele maka nha ya nke 40 x 40 mm ọ na-adaba adaba ọbụlagodi nke pere mpe.n
③ maka otu oge were. A gbanyụọ ihe mmado n’ọrụ tupu akpọpụ ya n’ụlọ ahịa.
1.Our mkpado anyị bụ obere akwụkwọ ma tinye ya n’okpuru akara ngosi aha gị. Site ịtụkwasị mkpado n'okpuru labeelu, anyị anaghị detract si gị mbọn ọlị. Enwekwara ịchekwa ego ị ga-enweta site na inwe akara ngosi na mkpado nche etinyere n'otu oge.
2.Large plastik dị ọcha anaghị adabara ihe niile. N'ihi ya ihe mmado mkpuchi bụ nhọrọ ka mma ma ọ bụrụ na ihe ndị a na-ekwu bụ maka ọmụmaatụ:
akwụkwọ na ebe obibi;
akụrụngwa na ngwa nchekwa;
ihe eji egwuri egwu;
ngwaahịa eji ihe nkiri ma ọ bụ roba;
♦Ngwaahịa a na-eji sistemụ RF8.2MHz redio ma na-ejikwa ya na shelf ụlọ ahịa iji gbochie ohi. O kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa niile na gburugburu nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa pụrụ iche. Akụkụ nke ojiji gụnyere uwe mkpado uwe, akwụkwọ, igbe ọdịyo na vidiyo CD, shampoo, karama na-ehicha ihu, yana ọtụtụ obere ngwaahịa ngwaahịa katọn.
♦Mgbe degaussing, jiri a raara onwe ya nye mgbochi-ezu ohi labelụ degaussing ngwaọrụ degaussing osisi. Biko etinyela akara dị nro na ebe edere ngwaahịa ahụ na ederede nkọwa dị mkpa, dị ka ngwakọta ngwaahịa, usoro ojiji, nkwupụta ịdọ aka na ntị, nha na akara ngosi, ụbọchị mmepụta, wdg. labelụ nnọọ nnyapade. Ọ bụrụ na ewepụrụ labeelu ahụ, elu ngwaahịa ga-emebi.
Nke gara aga: Uwe mkpuchi AM 58KHz Tags Mkpu Mkpu Mkpu Mkpado Mkpado-Nnukwu Mkpịsị Pensụl
Osote: RF 8.2Mhz EAS Mini Tag Square Black na Pin Retail Security Tag-Mini Square
EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label ụlọ ahịa ...
RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag Na Pin Retail Sec ...
RF 8.2Mhz EAS R50 Kpido na Pin Retail Security ...
Security Tag Label Deactivator N'ihi AM 58Khz EAS ...